Ukuze ukulungiswa amandla ukulinganisela yokutakula emzimbeni electrolyte ibhalansi usebenzisa izidakamizwa "Regidron ', okuyinto izidakamizwa elihlangene. It kuzole le esele amanzi-electrolyte, kahle ngenxa yesifo sohudo olunzulu noma ukuphelelwa amanzi emzimbeni ezinzima ngenxa ezinye zezizathu. Umuthi ikhishwe ngesimo powder ibekwe ngemigodla aluminium ucwecwe, okuyinto Agcwele amakhadibhodi amabhokisi at 4 noma 20 izingcezu ngamunye. Kokunye sachet iqukethe: sodium chloride 3.50 g Sodium citrate potassium 2.90 g chloride 2.50 g Dextrose 10.0 g ezimhlophe crystalline umuthi kakhulu oncibilikayo emanzini. Ngaphambi kokuthola rehydron ukulungele isixazululo ukunambitheka ecacile, kungekho nto enemibala emihle, nengenaphunga futhi lapho okunosawoti-sweet.
Indlela yokusebenzisa rehydron? Powder (iphakethe) usuhlakazekile e 1 litre amanzi eyayihunyushwe ngaphambilini abilisiwe futhi avunyelwe ukuba kuphole. Isixazululo kufanele alethwe Igumbi lokushisa ngaphambi kokuba uyisebenzise uma kuxutshwe. Umuthi kuboniswa ukusetshenziswa e kwale mibandela elandelayo: isidingo ukubuyisela uketshezi lomzimba kanye electrolyte ibhalansi lesiguli, uhudo acute (kuhlanganise nesifo sohudo). Futhi-ke asetshenziselwa ukulungiswa lactic, ukuze kube lula izimpawu ukushisa unhlangothi, nokuvimbela imithwalo ngokomzimba futhi ezishisayo kanye ukujuluka esindayo. Rehydron isicelo futhi ezimweni ubuthi, ngoba imnene amanzi emzimbeni ngokulinganisela kubangelwa acute sohudo kwesisindo libhekene kusuka 3 kuya ku-10%.
Ready ukuphuza ikhambi sips ezincane ngemva ngamunye ukuhlaselwa yisifo sohudo. Sibekezele phambi imishanguzo kuhlaziywe futhi ziqashwe izinguquko isisindo phambi yokutakula yayo. Phakathi namahora angu-10 zokuqala zokwelashwa isiguli ukunikeza isisombululo ezikhathini 2 isisindo elahlekile ngaphezulu. Izingane ezingaphezulu kweminyaka emithathu abadala ophuza 500 ml 1000 ml ke 200 ml ngokushesha ngemva uhudo ngamunye. Uma uhudo ephelezelwa ukuhlanza, khona-ke thatha rehydron ukuhlanza ngemva kwemizuzu engu-10.
Kumele kukhunjulwe ukuthi izidakamizwa enezinto eziningi Izimo, Ngakho-ke, zonke izixwayiso Kumele sifundwe imiyalelo. Iziguli sikashukela lokuqala nezinhlobo yesibili, ukwehluleka kwezinso, noma ezinye izifo ezingelapheki kudinga ukuzithiba ngokucophelela ngesikhathi yokwelapha rehydron kuze esibhedlela. Ezinjalo njengoba Izimo sina abazi lutho, ukuvaleka emathunjini noma hypersensitivity emuthini.
Uma udokotela ekunika rehydron nokuhlanza noma poisoning, umbiko mayelana nanoma yisiphi izidakamizwa ukuthi Okwamanje uthola noma ukuthatha isiguli (kuhlanganise namakhambi, isithako nomuthi, neziphuzo). Lokhu kubalulekile, njengoba kubalulekile impumuzo izimpawu isimo isifo futhi ugweme izingozi ziba zimbi ngokwengeziwe kuba nokuxhumana nezinye izidakamizwa. Rehydron kungayithonya nezinye izinto ukushintsha izakhiwo zabo azibukhali imvelo esiswini. Ngakho-ke akufanele uthathe lo muthi ngokwakho, udinga bonana nodokotela wakho futhi uqiniseke ukuthi inhlanganisela kunokwenzeka nezinye izidakamizwa ukuthatha isinyathelo ukuze uphephe.
Ngo amanzi emzimbeni okukhulu, lapho kwesisindo udlula 10%, Kuboshwe rehydration by ukumnika emthanjeni. Bese sebenzisa rehydron ukwelapha isifo sohudo. Zonke imiphumela engemihle engase ibe ukuthi kungenzeka uma ethatha rehydron nokuhlanza noma ezinye izimpawu zokuphelelwa amanzi emzimbeni, isiguli kufanele wazi. Futhi, qaphela ukuthi abantu abahlukile kulo muthi uyokwenza ngendlela ehlukile. Kodwa noma kunjalo, iziguli kumele singeqi umthamo watusa. Ngo ukweqisa izidakamizwa ingaqala hypernatremia (isimo lapho ngenxa ukulahlekelwa amanzi electrolyte waphawula ukwanda egazini lokuhlushwa sodium ion). Izimpawu hypernatremia zihlanganisa ukozela, ubuthakathaka, ukudideka, ukukhuthazwa kwamanyuroni, ukuboshwa zokuphefumula noma ikhoma.
Iziguli kahle kwezinso umsebenzi rehydron ukuhlanza noma ezinye izimpawu zokuphelelwa amanzi emzimbeni kufanele kuthathwe ngokuqapha ngangokunokwenzeka alkalosis umzimba (kwenyuke igazi pH nezicubu ngenxa ekuqongeleleni imikhiqizo alikhali umzimba). alkalosis umzimba kungaholela nobunzima bokuphefumula, ukushukuma kwamanyuroni, ngqi kanye nokugoqana komzimba. Endabeni imiphumela okunzima ukusetshenziswa eqinile rehydron ukweqisa izidakamizwa stop. Ukulungiswa uketshezi electrolyte ibhalansi kufanele esekelwe ulwazi etholakale ngesisekelo nophenyo laboratory.